Muqdisho:-Munaasabadda ay ka soo qeyb galeen madax ka tirsan DFKM ayaa waxay ka dhacayda xarunta Xalane oo fariisin u ah ciidamada AMISOM ayaa waxaa lagu qabtay xaflada uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM oo uu ka soo qeyb galay wasiirka difaaca ee DFKM Xuseen Carab Ciise, saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka dolwlada federaalka .
Taliyihii hore ee Ciidamada AMISOM Fred Mugisha oo munaasabada ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu xilka ku wareejiyo taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM Gen. Andrew Guti .
Gen. Andrew Guti Taliyaha Cusub ee ciidanka AMISOM ayaa u mahad celiyey taliyihii hore iyo ciidanka DFKM guulaha ay ka gaareen dagaaladii ay la galeen ciidanka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in ay sii wadayaan howlgaladooda.
Wasiirka Gaashaandhigga ee DFKM Xuseen Carab Ciise ayaa ka hadlay munaasabada ayaa waxaa sheegay inuu aad ugu mahad celinayo Fred Mugisha shaqada iyo howlaha ay ka qabteen ciidanka AMISOM magaalada Muqdisho wuxuuna tacsi u diray eheladii ciidamadii AMISOM ee lagu laayey magaalada Muqdisho.
Gen. Andrew Guti Taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM ayaa sheegay in ay sugayso in uu qabto howl adeg taas oo ay ciidanka AMISOM ugu talaabayaan gobalada dalka ee haatan ay gacanta ku hayaan ciidanka Al-Shabaab.
Xaflada uu xilka kula wareegay Taliyaha cusub ee ciidanka AMISOMGen. Andrew Guti ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Taliyaha Ciidamada Xooga dalka C/qaadir Sheeekh Cali Diini iyo abaanduulaha ciidanka DFKM Jen Cabdikariim Dhagabadan.